စောဇင်ညီ Archives > Page5of 8 > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / Tag Archives: စောဇင်ညီ (page 5)
မွန်အမျိူးသားပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၉၃ ဦး ရွေးချယ်ပြီးစီး အမျိူးသမီးပါဝင်မှုပိုများလာ
January 31, 2015 သတင်း 0
မွန်အမျိူးသားပါတီ ညီလာခံ တတိယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ တွင် ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် အသစ် ၉၃ ဦး ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် အမျိူးသမီးများပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။
အမျိူးသားပညာရေးဥပဒေ မွန်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖြန့်ဝေ
January 28, 2015 သတင်း 0
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ ပထခြေလှမ်းအဖြစ် အမျိူးသားပညာရေး ဥပဒကို မွန်ပြည်နယ် တက္ကသိုလ် နှစ်ခုရှိ ကျောင်းသားများသို့ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ဖြန်ဝေလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ် ကျောင်းသားများ ဆွေးနွေးပွဲ ရက်ရွှေ့ပြောင်း
January 24, 2015 သတင်း 0
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ နှီးဘုရားကြီးအနီး တောင်ပေါက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် မွန်ပြည်နယ် ကျောင်းသားများ ဆွေးနွေးပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့်အစား ၃၁ ရက်နေ့နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့သို့ ရွှေ့ပြောင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖယ်ဒရယ်စနစ်မျိူး လုပ်ထားဟု အစိုးရပြော
January 12, 2015 သတင်း 0
သမ္မတ အိမ်တော်၌ ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ၄၈ ဦး တွေ့ဆုံပွဲတွင် အစိုးရဘက်က လက်ရှိ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အခြေခံ သဘောတရား များသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံနှင့် ဆင်တူသည်ပာု အစိုးရဘက်မှ ပြောကြောင်း ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သည့် ချင်းအမျိူးသားပါတီ ဥက္ကဌ ဦးဇိုဇမ်က ပြောသည်။
ရန်ကုန် မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နိုင်စိုးအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
January 9, 2015 မေးမြန်းချက် 0
ရန်ကုန် မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီဥက္ကဌ နိုင်စိုးအောင်နဲ့ IMNA သတင်းထောက် စောဇင်ညီ တို့ပာ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီရုံးခန်းမှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ IMNA-ဆရာအနေ့ လူငယ်ဘဝတုန်းက ကျောင်းတက်နေရင်းနဲ့ ဒီမွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီမှာ ဘယ်လိုကြောင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ? နိုင်စိုးအောင်-အဓိကတော့ မွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ အတွက် မွန်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးအဖွဲ့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဒါက ကိုယ်လူမျိူးရဲ့ တာဝန် တစ်ခု ကို ထမ်းဆောင်ရမဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်လေးရှိလို့ပါ။မွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကို။(ရယ်လျှက်) IMNA-ဒီဥက္ကဌနေရာကို ရောက်လာအောင် ဆရာအနေနဲ့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့လဲ? နိုင်စိုးအောင်-ကျွန်တော်တော်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စာပေယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီမှာ နည်းနည်းကြီးမားတဲ့ တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်၊ ဒီလို အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ အခါမှာလည်းဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းက …
မွန်ပြည်နယ် ၆ မြို့နယ်အား မြေမြုပ်မိုင်းအန္တရယ်ဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ထား
January 4, 2015 သတင်း 0
မွန်ပြည်နယ် ၆ မြိုနယ်အား မြေမြုပ်မိုင်း အန္တရယ်များသောဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ကမ္ဘာ့ မြေမြုပ်မိုင်းတားဆီးရေး အဖွဲ့International campaign To Ban Landmine-ICBL က ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
MNP ညီလာခံတွင် ဦးဆောင်သူအဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဝင်ဆုံးဖြတ်မည်
December 26, 2014 သတင်း 0
လာမည့် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ မှ ၃၀ ရက်အထိ ၃ ရက်တာ ကျင်းပမည့် မွန်အမျိူးသားပါတီ (Mon National Party) ပထမအကြိမ်ညီလာခံတွင် ပါတီဦးဆောင်သူအဆင့်ဆင့်ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဝင်/ မဝင်ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဟု မွန်အမျိူးသားပါတီ ဒုဥက္ကဌ (၁) နိုင်သက်လွင်က လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA ကို ပြောသည်။